Ezona ndlela zintle zokuPosti kunye neeFomathi zoHlaziyo lweMeko | Martech Zone
Andiqinisekanga ukuba ngendibize le infographic Uyenza njani iZithuba eziGqibeleleyo; Nangona kunjalo, inayo ingcaciso enkulu malunga nokuba zeziphi ezona ndlela zisebenzayo zokuhlaziya ibhlog yakho, ividiyo kunye namanqanaba entlalontle kwi-intanethi. Olu luphawu lwesine lwe-infographic yabo edumileyo- kwaye yongeza kubhloga nakwividiyo.
Ukusetyenziswa kwemifanekiso, ukubizela isenzo, ukukhuthaza intlalontle kunye nee-hashtag zezona ngcebiso zilungileyo kwaye zihlala zihoywa njengabathengisi besebenza nje ukusasaza umxholo wabo. Andiqondi ukuba kuyamangalisa ukuba ezona ziphumo zibalaseleyo zifunyenwe xa uhlawula ingqalelo kwizicwangciso ozithumelayo kunye nokuvavanya ukuba azisebenzi kakuhle okanye hayi.
Akukho ngokwenene ayikho ogqibeleleyo Iposi elisebenza kuye wonke umntu-kubandakanya ixesha lezithuba. Kwenzeka ukuba sipapashe kwakusasa kwaye kusebenza kakuhle kakhulu. SiseMidwest ngoko ke ngokupapasha kwangethuba singafikelela ngaphesheya kwechibi emva kwemini, sifike kunxweme lwaseMpuma kusasa, kwaye sifikelele kwiindleko zaseNtshona… elona xesha lilungileyo leshishini lakho okanye ukupapashwa kuya kwahluka nokuba ungowalapha na , kuzwelonke, kumazwe aphesheya naxa abaphulaphuli bakho bemamele. Ukuba bendiyindawo; umzekelo, ndingafuna ukupapasha ngorhatya xa abantu baceba ubusuku babo.
tags: yangasemvaingxolo yangasemvaElona xesha lilungileyo lokuthumelaElona xesha lilungileyo lokuhlaziyangeposi blogiimvelisoumnxeba kwisenzoiintlokoumbalaizimvokuluntuInkcazoukuhlelaFacebooklandelaGoogle +hashtagsinstagramezifanaamakhonkcoukubalulanohlobo oluhambayoelona xesha lililoTwilleyiintlobo zeposiiziphumlisiukubhala ngokutshaumfanekiso ofanelekileyompenduloPhinda ubhaleulawulo yivotimfutshane urlizabelo zentlaloumgangatho wesandiukumakishaTagsIsithathuixeshaisihlokoezihambaizihloko ezihamba phambiliTumblrTwittermfutshane we-urlumdiliyaisibalo samagamayoutube
Ukunqongophala kwakho ekuphenduleni kuyonakalisa isiCwangciso sakho seMithombo yeendaba